IServo Motor, iStepper Motor, iServo Spindle Motor - iNewkye
Imininingwane Motor mo ...
Zisetshenziswa Bag ukwenza umshini nezinye izimboni emaphaketheni.
Kusetshenziswe ekukhiqizeni ifenisha yeflethi, iBuddha nezindatshana zobuciko, njll.
Kusetshenziswe kumshini we-cnc, njenge-lathe, ukugaya, ukugaya, isikhungo somshini njll imishini yokulawula izinombolo.
Kusetshenziswe irobhothi lokushisela, Ukufafaza irobhothi, irobhothi elikhubazayo, ukushaya irobhothi kanye ne-quilting manipulator njll.
Kusetshenziswe kumshini wokusika we-plasma, umshini wokusika ilangabi, ukusika kwe-laser
Kusetshenziswe ekuthungeni umshini we-Multi-head embroidery, umshini we-Flat knitting, umshini wezimbambo.
IHybrid Stepper Motor, IServo Motor Actuator, 220 Volt Ac Servo Motor, Kuvaliwe I-Loop Stepper Motor Driver, I-Stepper Motor ene-Encoder, IBig Servo Motor,